Vokatry ny sary an'ny iPhone 7 Plus amin'ny iPhone hafa, azo atao noho ireo fampiharana ireo | Vaovao IPhone
Vokatry ny sary an'ny iPhone 7 Plus amin'ny iPhone hafa, azo atao noho ireo fampiharana ireo
Hatramin'ny 2014, ny taona nanomboka nanombohana Apple fitaovana 4.7-inch sy fitaovana 5.5-inch, ny iPhone Plus dia manana endrika mandroso kokoa noho ny zandriny lahy kely. Ao amin'ny 2016, ny fiasa mahaliana indrindra an'ny iPhone 7 Plus dia, tsy isalasalana, fakan-tsary roa izay, ankoatry ny zavatra hafa, mamela antsika hanao ilay malaza vokany sary izay be dia be no voaresaka hatramin'ny nanombohany. Saingy amin'ny iPhone 7 Plus ihany no misy an'io endri-javatra io? Eny… na tsia raha mampiasa rindrambaiko an'ny antoko fahatelo izahay.
Na dia mazava aza fa tsy afaka mahatratra zavatra mitaky fikirakirana manokana amin'ny fampiasana rindrambaiko sasany isika, amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka isika fampiharana telo izay hahafahantsika manahaka ny vokany sary an'ny iPhone 7 Plus, ary ireo rindranasa ireo dia azo ampiasaina amin'ny fitaovana rehetra mifanentana aminy, mba hahatratrarantsika an'io vokany io amin'ny alalàn'ny manjavozavo, ohatra, iPhone 5s.
1 Vokatry ny sary miaraka amin'i Patch
2 Vokatry ny sary miaraka amin'i FabFocus
3 Vokatry ny halaliny
Vokatry ny sary miaraka amin'i Patch
Ny voalohany amin'ireo fampiharana izay horesahintsika dia Patch, fampiharana izay nataoko hamoronana ilay sary etsy ambony. Tsotra dia tsotra ny fampiasana azy: afaka manao na manokatra sarin'ny sarimihetsika isika, manisy marika izay tiana hotazomina mazava tsara ary hamela tsy misy marika ny zavatra tiana ho manjavozavo amin'ireo fitaovana roa misy (borosy sy faoma). Rehefa vita ny fanitsiana dia maharitra segondra ny famoronana sary.
Betsaka ny zavatra tsy maintsy hazavaiko momba ity fampiharana ity: ny voalohany dia, raha tsy mividy $ 1.99 mitambatra isika, dia ho hitantsika ny mari-drano eo amin'ny ankavanana ambany izay milaza hoe "PATCH". Ny faharoa dia izay manana maody mandeha ho azy izy io haminavina ny fomba tianay hivoaka ilay sary, saingy ity maody mandeha ho azy ity dia mahatratra kely noho ny famantaranandro nijanona izay nahatratra indroa isan'andro. Ny zavatra fahatelo tiako holazaina dia ny fanatsarana ilay sary etsy ambony; Nataoko somary haingana ny fampidirana azy ato amin'ity lahatsoratra ity, saingy ho tsara kokoa izany raha vao manatsara ny safidintsika isika.
Oh, ary zavatra iray hafa: raha ny lojika dia azontsika atao koa ny mampiasa an'io fampiharana io apetaho ireo sary nalaina taminay tamin'ny iPhone 7 Plus tsy misy an'io.
Vokatry ny sary miaraka amin'i FabFocus
FabFocus dia rindrambaiko izay tsy manome maody maimaimpoana, fa ny maody mandeha ho azy dia tsara lavitra noho ny fampiharana teo aloha. Mampiasà ny fanekena ny tarehy sy ny famantarana ny vola hahafantatra izay hasongadina ary inona no hosotehina. Saingy, satria sarotra ho an'ny valiny ho marina raha tsy misy fitaovana manokana, dia azo inoana fa hiafara amin'ny fanindriana ny bokotra "Hanova" isika mba hanamafisana ny fifantenana.
Ny lafy ratsy dia ny teknolojia manatsara ny fanekena ny zavatra azo avy amin'ny vidiny ary FabFocus dia misy ao amin'ny App Store amin'ny € 2.99. Mazava ho azy, lozika tsy misy mari-drano sy kintana 5 araky ny hevitr'ireo mpampiasa.
Vokatry ny halaliny
Ary miafara amin'ny rindranasa iray izay afaka manao mihoatra noho ny nataon'ny iPhone 7 Plus amin'ny fakantsary aza isika. Ny Lalina Efitra dia fampiharana izay hanova ny ao ambadika, fa amin'ny fomba hafa: ny fampiharana mampiasa ny halalin'ny kianja anamorphic sy bokeh sinema, izay amin'ny farany dia mampiseho valiny tena izy, hany ka io no hany fampiharana App Store hahatratra azy ireo.
Ireo mpampiasa isika dia afaka mampitombo na mampihena ny hamafin'ny vokany mikorisa amin'ny a Slider ary afaka mampiasa rantsan-tànana roa isika hanamboarana ny faritra malalaky ny sary, saingy, araka ny nampoizina, dia hiafara amin'ny famaritana an-tanana ny fifantenana avy amin'ny bokotra "Custom" izay ahafahantsika manomboka amin'ny rangotra hisafidianana izay mahaliana antsika .
Ho fanampin'ny blur, ny halalin'ny vokany misy ny fampiasa, fitaovana ary safidy hafa izany dia hahatonga ny sarintsika ho manaitra kokoa, na dia miahiahy aza aho fa izany no tena mahaliana antsika rehefa mitady vokatra pôrnika hahazoana vokatra mahonena nefa tsy misy karazana entana be loatra.
Azontsika atao ny mividy ny effets ny halalin'ny App Store a vidiny 3.99 €.
Iza amin'ireo safidy telo no tianao indrindra?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Vokatry ny sary an'ny iPhone 7 Plus amin'ny iPhone hafa, azo atao noho ireo fampiharana ireo
Eloco dia hoy izy:
Misy ny antsoina hoe fakan-tsary Tadaa HD Pro.
Manao toy izany koa, manana sarontava tsara, ary maimaim-poana.
Ankoatr'izay, manana bonus bonus ianao.
Mamaly an'i Eloco
Super Mario Run dia nohavaozina tamin'ny fampidirana fomba tsotra vaovao
Miato ny fiampitana biby ho an'ny iOS; dia ho tonga manomboka amin'ny volana aprily